Iindaba-Cwangcisa ukujonga ukusetyenziswa kwebhetri yemoto
I-China izakukhawulezisa iinzame zokuphinda zisebenzise iibhetri ezintsha zamandla ombane ngokuhambelana nesicwangciso seminyaka emihlanu sokuphuhlisa uqoqosho setyhula esityhilwe ngoLwesithathu, zitshilo iingcali.
Ilizwe kulindeleke ukuba lifikelele kwincopho yokubuyiselwa kwebhetri ngowama-2025.
Ngokwesicwangciso esikhutshwe yiKhomishini yoPhuculo noHlaziyo yeSizwe, umlawuli ophezulu wezoqoqosho, i-China izakuqinisa ekwakheni inkqubo yolawulo lokulandelela isithuthi esitsha samandla okanye iibhetri ze-NEV.
Amanyathelo angaphezulu aya kuthathwa ukukhuthaza abavelisi be-NEV ukuba babeke uthungelwano lwenkonzo yokurisayikilisha ngokwabo okanye ngentsebenziswano nabadlali beshishini abanyukayo nabasezantsi, sitsho isicwangciso.
U-Wang Binggang, umcebisi obekekileyo we-China Society of Automotive Engineering kunye nongumhlohli kwi-International Eurasian Academy of Sciences, uthe: “Ishishini lezithuthi zombane lase China lingene kwinqanaba elitsha lokukhula ngokukhawuleza ngeshishini lebhetri elaliqala ukubonakala. Kubalulekile ngobuchule ukuba ilizwe libe nezixhobo ezizinzileyo zebhetri kunye nenkqubo yesandi yokusebenzisa ibhetri ngokutsha.
"Eli nyathelo likwanokubaluleka, njengoko ilizwe lizinikele ekuphupheni ikhabhoni ngo-2030 kwaye lifumana ukungathathi cala kwikhabhoni ngo-2060."
I-China, njengeyona ntengiso inkulu ye-EVs, yabona ukuthengiswa kwayo kwe-NEV kule minyaka idlulileyo. Umbutho wase China wabavelisi beemoto uqikelele ukuba ukuthengiswa kwe-NEV kuya kudlula iiyunithi ezizigidi ezi-2 kulo nyaka.
Nangona kunjalo, idatha evela kwi-China Automotive Technology kunye neZiko loPhando ibonakalise ukuba iibhetri zamandla eziphelisiweyo zelizwe zifikelele kwi-200,000 yeetric metric ngasekupheleni konyaka ophelileyo, ngokunikwa ixesha lokuphila kweebhetri zamandla zihlala zimalunga neminyaka emithandathu ukuya kwesibhozo.
I-CATRC ithe i-2025 izakubona ixesha eliphakamileyo lokutshintshwa kwebhetri entsha kunye neyadala kunye neetoni ezingama-780,000 zeebhetri zamandla ezilindeleke ukuba zihambe ngaphandle kweintanethi ngelo xesha.
Isicwangciso soqoqosho setyhula seminyaka emihlanu sikwabonakalise indima yokusetyenziswa kweebhetri zamandla, ezibhekisa ekusetyenzisweni okufanelekileyo kwamandla aseleyo eebhetri zamandla kwezinye iindawo.
Abangaphakathi kumzi-mveliso bathi oku kuyakukhuthaza ukhuseleko kunye nokwenzeka kworhwebo kushishino lokurisayikilisha ibhetri.
U-Liu Wenping, umhlalutyi kunye ne-China Merchant Securities, uthe ukusetyenziswa kwe-echelon kunokwenzeka ngokuba ibhetri yamandla ephambili eyenziwe nge-lithium iron phosphate ayiqulathanga isinyithi esinexabiso eliphezulu njenge-cobalt kunye ne-nickel.
“Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa neebhetri ezine-lead-lead, inezibonelelo ngokubhekisele kubomi bomjikelo, ukuxinana kwamandla, kunye nokusebenza kobushushu obuphezulu. Ukusetyenziswa kwe-echelon, endaweni yokurisayikilisha ngqo, kuya kwenza inzuzo enkulu, ”utshilo uLiu.